February 2018 – WarkaDalka.com
Hub iyo Walxaha Qaraxa oo lagu qabtay magaalada Beledweyne
February 28, 2018 Warka DalkaLeave a Comment on Hub iyo Walxaha Qaraxa oo lagu qabtay magaalada Beledweyne
Arbaco, Feberaayo, 28, 2018 (HOL) – Taliyaha qeybta Booliiska gobolka Hiiraan Col Isaaq Cali Cabdulle oo warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay hub iyo walxaha Qarxa oo lagu qabtay magaalada Beledweyne. Ciidamada dowladda Soomaaliya Aroornimadii oo saakay howlgal ka sameeyay qeybo ka mid ah xaafaddaha magaalada Beledweyne ayaa […]
February 28, 2018 Warka Dalka
Xsibiyada mucaaradka ee Jabuuti, gaar ahaan kuwii qaaddacay ka qeyb galka doorashaddii baarlamanka ee dalkaasi ka dhacdey 23-kii bishan Febraayo, ayaa maanta soo saaray qoraal ay kaga war-bixinayaan aragtidooda ku aaddan natiijada doorashada iyo hadalkii kor-joogayaasha Midowga Afrika ay ka soo saareen doorashada. Duqii hore magaalada Jabuuti oo ka mida ah madaxda mucaaridka siyaasadda ee […]
Mid ka mid ah xildhibananada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, ayaa si weyn ugu dhalleeceeyey dawladda inay mas’uul ka tahay bixitanka macallimiinta ay ka baxayana gobolkaasi. Rashiid Qaasim Nuur oo laga soo doorto bariga Wajeer oo ahayd halkii dhowaan uu ka dhacay weerarka lagu dilay labada macallin ayaa sheegay in bixitaanka macallimiinta uu dib dhac […]
Maleeshyada ururka al-Shabab ayaa la sheegay inay ku dileen sagaal dameer meel ah u dhow magaalada Waajid ee gobolka Bakool maanta. Al-Shabab ayaa la sheegay inay qabteen gaari dameerrada, kuwaas oo ay ku rarneyd cunto loo wadey degmada Waajid. Warka ay VOA heleyso ayaa intas ku daraya in al-Shabab ay qabteen laba nin oo la […]
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka howlgala gobalka Hiiraan ayaa gacanta ku dhigay hub iyo qalab loo adeegsado qaraxyada ka dib howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Baledweyne. Ciidamada ayaa sidoo kale waxaa ay soo qabteen rag hubeysan oo aan ka mid ahyen ciidamada dowladda kuna sugnaa guri ku yaala xaafada Oktober ee Baledweyne. Embed share Embed […]
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmana Ducaale Bayle ayaa sheegay in ay tahay in ganacsatadu ay bixiyaan canshuuraadka xaqa loogu leeyahay, si ay dowladdu u shaqeyso. Waxa uu Beyle sheegey in muranka ka taagan canshuuraha uu saameeyey dakhligii wasaaradda maaliyadda ee bishan. Warbixintan waxa anoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste. Embed share Embed share No media […]
February 28, 2018 Warka DalkaLeave a Comment on Wasiir Beyle : Saameyn Adag ayuu nagu yeeshay khilaafka Canshuurta
Arbaco, Feberaayo,28,2018 (HOL)-Wasiirka Wasaaradda Maaliyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in saameyn adag ka dowlad ahaan uu ku yeeshay muranka ka dhashay bixinta canshuurta. Wuxuu sheegay Wasiirka in bishan Feberaayo Wasaaradda soo xareynin Dakhli badan balse ay meelmariyeen bixinta mishaaraadka. ”Murankaa iyo Khilaafka ka dhashay dhinaca canshuuraha […]
Wasaaradda amniga ee Kenya Fred Matiyaang, ayaa sheegay in ay ciidamo badan geynayaan xadka ay la wadaagaan Soomaaliya. Arrintaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu wasiirku booqday magaalada Wajeer oo laba toddobaad ka hor lagu dilay macallimiin halkaasi wax ka dhigayay. Wariyaha VOA ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire, ayaa warbixintan soo direy. Embed share Embed […]
Dowladda Kenya oo sheegtay in 23 dagaalyahan oo Al-shabaab ka tirsanaa ku dileen gobolka Gedo
February 28, 2018 Warka DalkaLeave a Comment on Dowladda Kenya oo sheegtay in 23 dagaalyahan oo Al-shabaab ka tirsanaa ku dileen gobolka Gedo
Arbaco, Feberaayo, 28, 2018 (HOL) – Howlgalo militari oo wada jir isaga kaashadeen ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayeey saraakiisha Kenya sheegeen in lagu dilay ilaa 23 ka tirsan dagaalamayaasha Al-shabaab deegaanka Faafax-Dhuun ee gobolka Gedo. Warkan oo lagu daabacay Wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa lagu sheegay in […]
Ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna oo leysku dhafayo
February 28, 2018 Warka DalkaLeave a Comment on Ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna oo leysku dhafayo
Arbaco, Feberaayo, 28, 2018 (HOL) – Madaxweynaha dowlad gobolleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa Dhuusa-Mareeb u tagay isku dhafka ciidamada Galmudug iyo Ahlu Sunna Waljameeca. Socdaalka Xaaf iy Dhuusa-Mareeb ayaa noqonaya kii labaad tan iyo markii Galmudug iyo Ahlu Sunna isku biireen, iyadoo bishii hore isaga iyo madaxweyne Farmaajo ay isla tageen oo […]